यो त अति भएन र ? गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका ससुराको निधनमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा – My Blog
No Comments on यो त अति भएन र ? गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका ससुराको निधनमा गाउँपालिकामा सार्वजनिक बिदा
काठमाडौ । स्थानिय तहलाई जनताका लागि सिंहदरवार हो । जनताका काम छिटो र छरितो बनाउनका लागि स्थानिय तहको परिकल्पना गरियो । अहिले महामारीका कारण सर्वसाधारण बाहिर निस्कन पाएका छैनने । त्यसैले सरकारी कामकाज पनि निकै कम हुने गरेका छन् । अत्यावश्यक बाहेक सर्वसाधारण वाहिर ननिस्कने भएकाले कामकाज पनि कम भएका हुन् ।
तेह्रथुममा गाउँपालिका उपाध्यक्षलाई शोक पर्दा पालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक विदा घोषणा गरिएको छ । मेन्छयायेम गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीतादेवी तिम्सिना गौतमको ससुराको निधन भएपछि पालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।
उपाध्यक्ष तिम्सिनाका ससुरा विष्णुप्रसाद गौतमको गएराति पौने १२ बजे ९६ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । उपाध्यक्षलाई ससुराको शोक परेपछि गाउँपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको हो ।
गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालयहरु, गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु एवं गाउँपालिका मातहतका कार्यालयहरु ९स्वास्थ्य संस्थाबाहेक० सबै बन्द हुने सूचनामा जनाइएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवबहादुर खापुङले उपाध्यक्षकै ससुरा भएका कारण स्थानीय तह ऐन सञ्चालनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी शोक बिदा दिएको दाबी गर्नुभएको छ ।
‘उपाध्यक्षकै ससुराको निधन भएको छ । गाउँपालिका नजिकै उहाँको घर छ । जनप्रतिनिधिहरु पनि मलामी जानु नै पर्यो । त्यसैले स्थानीय तह सञ्चालन ऐनको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर एक दिन शोक बिदा दिएका हौं ।’
← उदयपुरमा रू ६० लाख खर्च गरेर सुँगुरको शालिक खडा गरियो → आफुलाई इच्छा हुन्थेन तर उहाँ आइहाल्नु हुन्थ्यो….